Ogoow hal-ka qof ee haddii aad dhegeysatid guulaysanaysid
Home Hoyga Nolosha Ogoow halka qof oo haddii aad dhegeysatid aad guulaysanayso
Ogoow halka qof oo haddii aad dhegeysatid aad guulaysanayso
Ditoore, waxba haka walwalin. Waan ogahay in aan dhimanaayo. Ma rabin in aan halkan imaado, iyaga ayaa isoo khasbay.
Taladaan waxaa bixiyay oday waayeel ahaa oo ku jiray muddooyinkii ugu dambeeyay ee noloshiisa. Waxaa laga qoray mar uu la kulmay Taqtar dhallinyaro ahaa oo uu kula kulmay isbitiaal.
Waxayna ku bilaabatay sidaan;
Fadlan ha iga wal-walin, timahayga fiiri, wey iga dhammaadeen. Waxaan ahay waayeel adigana aad ayaad u yartahay, wax badan ayaan nolosha ka bartay, haddii aadan dhib u arkeynin, wax ayaan kaaga sheegayaa waxa aan bartay.
Markaan 4 jir ahaa, waxaan u malayn jiray adduunka inuu aniga igu saabsan yahay,
Markaan 14 jirsaday, waxaan rabay in aan dunida dhan xukumo, waxaan isu haystay in aan noqon doono ninka adduunka ugu weyn uguna awoodda badan.
Markaan 21 jir ahaa, waxaan rabay in aan noqdo ninka ugu taajirsan adduunka,
Markaan 25 jirsaday, waxaan rabay in aan helo Jacayl,
Markaan 40 gaarayna waxaan rabay in aan caawiyo cid walba.
Haddana adiga ayaan kula joogaa isbitaalkan, waxaan rabana waa in aan iska dhinto. Ma aragtaa in aan marba wax rabay inaan ahaado ama noqdo.
Tan ugu muhiimsan ayaa ahayd in aan mar walba rabay in aan helo farxad, waxaana u haystay qaabka ugu wanaagsan ee lagu helo farxad in ay tahay in aan dhegeysto cid walba iyo taladooda.
Markii aan rabay in aan Jaamacadda bilaabo, waxaan jeclaa in aan barto cilimiga xayawaanka (Zoology) balse waxay dadka ii dhow ku taliyeen in aan barto maaddada Injineernimada. Waan dhegeystay.
Ma aanan haysanin cid iga bixisa kharashkaas, waxaan ku khasbanaaday in aan aniga shaqo iyo waxbarashada isku wado si aan iskaga bixiyo lacagta Jaamacadda. Markaan marayay sanadkii saddexaad, way igu adkaatay in aan sii wato, waxaana go’aansaday in aan meeshaas uga tago.
Markaan ka tagayna, dadkii igu qalqaaliyay in aan barto injineernimo, ayaa i dhahay, “waxaa kuu dhaantay in aa barato maaddada aad jeclayd ee cilmiga xayawaannada.”!
Markaan gaaray 28 sano, qof walba wuxuu iisoo jeediyay in aa guursado, waxaad u baahan tahay in aad xaas yeelato, ayaa qof walba ii sheegay, waan dhegeystay, waan guursaday.
6 sano markaan is qabnay oo carruur isu dhalnay, waxaan ogaaday in xaaskayga ay gogol dhaaf sameeyso, waxaan arkay iyada iyo nin aan daris ahayn oo qol ku wada jira. Markaan weydiiyay sababta ay ii khiyaanayso, iyada ayaaba is xanaajisay.
Waan xanaaqay, inta aanan waxba sameynin, waxaan maalinkii labaad kusoo laabtay gurigaygii oo cidla ah, waxay la carartay carruurtaydii iyo ninkii dariska ahaa, dib dambana uma aanan arkin iyada iyo carruurtaydii. Hadda waxaan joogaa halkan, waxaan ahay nin oday ah, oo gogoshiisii geerida ku cidleysan.
Markaan 40 jir ahaa, waxaan helay qandaraas aad u weyn, magacaygana waxaa laga sii daayay warbaahinta dhan.
Maalinki labaad, waxaa gurigayga soo buux dhaafiyay inta saaxiib iyo qaraabo aan lahaa, qof walbana wuxuu ka cabanayay dhibaato, waxay iga deynsadeen lacagihii qandaraaska aan ku qaatay oo loogu talo galay in aan ku qabto shaqo, waxay ballan ku wada qaadeen in muddo yar ay kusoo celin doonaan.
Waxaa la dhaafay wakhtigii ay ii qabteen in ay lacagta kusoo celiyaan, kaddibna way diideen in ay soo celiyaan lacagtii, waxaan dhamaystiri waayay shaqadii qandaraaska aan ku qaatay, waxaa la isoo saaray maxkamad, waxaana la igu helay dambi, waxaa la i xiray 6 sannadood.
Markii aan dhamaystay, qaraabadaydii iyo asxaabtii aan dartooda xabsiga u galay ayaa iga kala dhuuntay.
Waxaa jiray hal khalad aan sameeyay intaan noolaa, kaas oo sabab u ahaa in aan dhibaatooyin badan maro. Waxaan si fiican u arkaa khaladkaas. Haddaan kuu sheego, yuusan kula fududaanin.
Khaladka ugu weyn aan sameeyay wuxuu ahaa in aan diiday inaan dhegeysto nafsaddayda. Waxaan iska indho-tiray taladayda, fikirkayga, waxaana doorbiday in aan dhegeysto fikradaha dadka kale.
Wakhtigan la taagan yahay, qofka aan haysto oo meeshan ila joogo waa nafsaddayda, inta qof aan talo ka dhegeysan jiray ilama joogaan.
Runtii waa ay fiican tahay in aad dhegeysatid dadka kale, aragtidooda dhuuxdid, talana aad ka qaadatid marwalba oo ay habboon tahay, balse waa halis in wax walba aad ku dhaqaaqdid ay ka yimaadaan dadka kale, waa halis in waxa qalbigaaga ku jiro aad iska indha-tirtid.
Waxaan kugula talinayaa, caawa marka aad gurigaaga tagtid, fadhiiso, galaas biyo ah cab, indhahaaga xir. kadibna nafsaddaada la hadal. Adiga isla hadal, caqligaaga kaasho, ka fikir waxa aad rabto, waxa aad nolosha ka rabto.
Ilaahay keliya ayaa joojin kara waxa aad rabtid, ilaahay la tasho, usheeg waxa aad rabto, ka bari in uu kuu fududeeyo. Alle ka sokoow, nafsaddaada ku kalsoonow. Taladayda waa in aad baratid sidaad u dhegeysan lahayd nafsaddaada.
Previous article4 arrimood samee si aadan uga cabsanin qofka madaxda kuugu ah goobta shaqada
Next articleU gaar ah dadka khuuriya: Talooyinkan qaado si aad u joojisid
Sida aad adiga oo aan Gym tagin ku dhimi kartid 1-kiilo ilaa 1.5 kiilo usbuucii
Todobbadan qaab ula dhaqan dadka raba in ay sharaftaada hoos u dhigaan
Shanta isbeddel ee wanaagsan ee jacaylka uu jirkaaga ku sameeyo